गगन जी कांग्रेसले चाहीं जनतालाई हिसाब किताब दिनु पर्दैन ?::Pathivara News
मिन बहादुर पण्डित प्रधानमन्त्रि केपी सर्मा ओलीले संसदमा बिस्वासको मत लिदै गर्दा बाम गठबन्धनको घोषणा पत्र बिरुद्ध सदनमा आक्रामक ढंगले निकै चर्का भाषण ठोक्नु भयो । यस्तै सेर आक्रामक तरीक़ाले सेर बहादूर सरकारले काम गरेको भए चुनावमा लजास्पद हार ब्यहोर्न पर्ने थिएन । त्यती खेर किन सेर बहादुर सरकारको गलत कामको विरोध गर्न सक्नु भएन ?
अनि यत्ति पनी बीर्सनु भो कांग्रेसको घोषणा पत्र पनी केहि कम छैन भनेर ? कांग्रेसले चाही आफ्नो घोषणा पत्रमा किन मेट्रो र फ़्लाई वोबरको फ़ोटो राखेको नी ? की नेपाली जनतालाई झुक़याउने अधिकार कांग्रेसलाई मात्र छ ? नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सबै भंदा धेरै सरकार चलाउने नेपाली कांग्रेस नै होईन र ? अनि कांग्रेसले चाही जनतालाई हिसाब किताब दिनु पर्दैन र ? लेनदेन र हिसाब किताब भनेको बराबर हुनु पर्दछ, तर यो त लिनु छ भने समझेंर लिने तर दीने ठाऊमा चाही बीर्सेको भान गरे जस्तो भएन र ? आफूले कहिले सरकार राम्रो संग चालाऊँ नसक्नेले सरकार क़सरी चालाउने भनेर अरुलाई सिकाऊँन सुहाउछ ?
हिसाब किताब नगदमा ख़ोज्नेले विदेशी संग लिएको उधारों अर्थात ऋण भ्रष्टचार र कमीशन-खोरी गर्न मिल्थ्यो ? अर्कों कुरा क़ुन कम्युनिस्ट सुद्द र क़ुन कम्युनिस्ट असुद्द छुट्याउनु सट्टा आफ्नो पार्टी कती सुद्द छ र कती असुद्द छ त्यों चाही पहिले छुट्यउदा राम्रो होला । हामिले बुझेको गगन थापा कांग्रेसका नेता मध्य सबै भंदा क्षमतावान नेता हुन, त्यों भंदा बड़ी केहि पनी होईनन । अलिकता क्षमता हिजो संसदमा पनी देखाउनु भयो । त्यसैले विरोधका लागी विरोध होईन, बास्तबीकता बुझेर मात्र बिरोध गर्नुहोस । जनमत कति र कता तिर छ त्यो पनि बिचार गर्नुहोस । आफ्नो आङ्गमा भैसी नदेख्न्ने तर अरुको आङ्गमा जुम्रा देख्न्ने ? अनि कुमार घैटे भन्ने गुण्डा इन्काउन्टरमा मर्दा तपाईंले चर्को बिरोध गरेको पनि हामीले बिर्सेका छैनौ ।
विप्लब मात्र असली कम्युनिस्ट हुन्, कम्युनिस्टहरुले संसदीय व्यवस्था मान्नु हुदैन भन्नुको अर्थ सबै कम्युनिस्टहरुलाई जंगल पठाएर कांग्रेसले मात्र राज्य चलाउने भन्नु भएको हो ? यो तर्क अलिकता पनि मिलेन । कम्युनिस्टहरु संसदीय व्यवस्थामा नआएर कता जाने ? अनि कम्युनिस्टहरु संसदीय व्यवस्थामा आएनन भने देशमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो बिगतको दस बर्से जनयुद्दलाइ हेर्नुहोस् । कांग्रेसले खोजेको त्यहि हो ? मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनबाद ( जबज ) हेर्नु भएको छैन ? अनि कांग्रेसको खोक्रो समाजबादको बास्तबिक अर्थ थाहा छ ? कांग्रेसको नीति र नियत देखेर मदन भण्डारीले कांग्रेसलाइ च्यालेन्ज दिएका थिए, कांग्रेसले अब खोक्रो प्रजात्रन्त्रिक समाजबाद भन्ने नारा छोड्नु पर्छ भनेर । त्यो कुरा बिर्सनु भयो ? तपाईंका पार्टीका परराष्ट मन्त्रि र र गृयमन्त्रीले एक बर्षमा ११ चोटी दिल्ली धाएर नेपाली जनतालाई लज्जा बोध गराएको बिर्सनु भयो ? केपीको कारणले अब नेपाली नेता भारत होइन मोदी र अन्य देशका प्रधानमन्त्रि नेपाल धाउने छन, हेर्दै जानु होला ।
अब कांग्रेसको योगदानको पनी चर्चा गरौ । मेलम्ची खाने पानीमा भ्रस्टचार गरेर सेर बहादुर ९ महिना जेल परेको, अनि फास्ट ट्रयाक इन्डियालाई दिएर करोडौ कमिसन खान खोजेको, भुकम्प पिडितको जस्तापाता समेत नछोड्ने, उद्योग कलकारखाना कमिसन खाएर व्यापारीलाई कौडीको भाउमा बेचेको, भ्रस्टचारीले पनि चुनाब लड्न पाउनु पर्छ भनेको, सधै प्रजात्रन्त्र ल्याए भनेर धाक लगाउने, ६० लाख युवालाई खाडी जान बाध्य पारेको, यो पाली सकिन अर्को पालि समिधान संसोधन गर्छु प्रभु भनेर मोदीलाई बिन्ति चडाएको, चिनिया रास्टपतिको नेपाल भ्रमण रोकेर भारत खुसि पार्न केपी सरकार ढालेको, चिनिया रेल रोक्ने भारतीय चाहनालाई साथ दिएर रेल बनाउने कुरामा आलटाल नीति अबलम्बन गरेको, लाउडा धमिजा लगाएत अनगिन्ति काण्ड मच्चाएको, नदि नाला भारतलाई बुझाइ सकेको, आफै महाकाली बेचेर केपिलाई दोस लगाएको, आफ्नै पालामा नाकाबन्दी भएर पनि नाकाबन्दी भन्न नसकेको, देस बनाउने कुनै भिजन र मिसन नभएको
, सरकारी सस्थांनहरुलाइ कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएर आर्थिक भार पारेर घाटामा पुर्याएको, राज्य कोस बाट करोडौ रकम आफ्ना कार्यकर्तालाई बाडेको, सत्ता टिकाउन ६४ जनाको मत्रिमंडल बनाएर देशलाई अर्बौको भार पारेको, स्वच्छ छविको भूपू प्राधान न्यायधिसलाइ महाअभियोग लगाएर स्वत्रन्त्र न्यायालयको काममा हस्तक्षप गरेको, आफ्नालाई आइजीपी बनाउन नवराज सिलवाललाई अन्याय गरेको, लोकप्रिय मनमोहन सरकार केपी सरकार आदि ढाल्न माहिर, प्रजात्रन्त्र दरबारमा बुझाएको, कम्युनिस्टहरुले जिते भने रुन समेत पाइदैन, देशमा अधिनायक बाद आउछ आदि भनेर झुटो भ्रम फिजाउने, सांसदलाई पेन्सन चाहियो भनेर आफ्नो मात्र भबिश्य हेर्ने, सरकारमा रहदा बिदेस भ्रमणमा रमाउने,चुनाबको बेला मेट्रो रेल देखि लिएर सुदुर पक्षिमलाइ सुनको टुक्रा बनाउछु भनेर जनता झुक्याउने पार्टीलाई जनताले यो चुनाबमा राम्रो संग पाखा लगाई दिए ।
अझै पनी एदी कांग्रेसको बिस्वास गर्ने हो भने देसमा परिबर्तन कहिले पनि आउने छैन । त्यस्तो पार्टीलाई पनि राम्रो पार्टी भनेर बखान गर्ने, गल्ति र कमजोरीहरू ढाक छोप गर्ने गगन थापाको स्वाभिमान देखेर त दया लाग्यो । त्यसैले नेपाली जनताले गगनलाई र कांग्रेसलाई होईन बाम गठबन्धन बिस्वास गर्नु पर्छ । त्यों अपार बिस्वास यो चुनावमा पनी देखियो । त्यस कारण भ्रस्ट र असक्षम पार्टीमा बसेर गगनले केहि गर्न सक्ने वाला छैनन् ।
अरु पार्टीमा भन्दा गगनलाई कांग्रेस मै भबिश्य छ, तर नेपाली जनाताको कांग्रेसमा भबिश्य छैन भनेर बितेको ७० बर्षमा प्रमाणित भैसक्यो । धेरै चोटी बहुमतको सरकार चलाएर असफल भएको कांग्रेसलाइ अझै कति मौका दिने ? अब एकचोटी कम्युनिष्टको बहुमतको सरकारको काम पनि हेरौ, केहि गरेनन भने हामि सबै मिलेर नया बिकल्प खोजौला । राजनीतिक परिबर्तन होइन आर्थिक परिबर्तनलाइ अबको बाटो बनाउने पार्टीलाई समर्थन र सहयोग गरौ, परिवर्तन पक्कै पनी आउनेछ । त्यस कारण गगनले आज संसदमा बो